ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးမရှိဘူးလို့တှေးမိတဲ့အခါ . . . .
ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးမရှိဘူးလို့တှေးမိတဲ့အခါ ဒီအခကျြ ( ၅ ) ခကျြကို သတိရပါ။
သူငယျခငျြး ခုရကျပိုငျးအတှငျးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အသုံးမဝငျတဲ့လူ လို့ ခံစားနရေလား ???
သူငယျခငျြးရဲ့ ယုံကွညျခကျြတှေ အနှုတျလက်ခဏာ ဆောငျနပေါသလား ???
ဒီလိုဆိုရငျတော့ သူငယျခငျြးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈမယျ့ အခကျြ ( ၅ ) ခကျြ ကို ပွောပွပေးပါ့မယျ
( ၁ ) ဒီခံစားခကျြတှေ က တဈခဏတာ ဆိုတာ သတိရပါ
သူငယျခငျြးရဲ့ ဘဝမှာ ခံစားခကျြတှကေ ဘယျတော့မှ အဆိုးမရပါဘူး။ အခြိနျတိုငျးပွောငျးလဲနတောပါ။ သူငယျခငျြးလညျး ကိုယျ့ကိုကိုယျ တနျဖိုးမရှိဘူးလို့တှေးမိတဲ့အခါ ဒီခံစားခကျြက ယာယီပဲ၊ အဆငျမပွမှေုတှဟောလညျး ခဏတာပဲ ဆိုတာ သတိရပါ။
( ၂ ) ကမ်ဘာ့အအောငျမွငျဆုံး ပုဂ်ဂိုလျ တှလေညျး ဒီလို ခံစားဖူးကွတယျ ဆိုတာ သတိရပါ။
လူတိုငျးမှာ ကိုယျစီကိုယျစီ ဆန်ဒတှေ ရှိကွပါတယျ အဲဒီ့ဆန်ဒတှေ မပွညျ့ဝတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးမရှိဘူး လို့ တှေးမိကွတာပါ။ ဒီလို တှေးမိတာဟာ သူငယျခငျြးတဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ ( Facebook ) ကို တညျထောငျခဲ့တဲ့ "မကျဇူကာဘကျ"တောငျ သူ့ရဲ့ တခွားဆော့ဖျဝဲတှေ မအောငျမွငျခဲ့တုနျးက သူကိုယျတိုငျလညျး စိတျဓာတျကြ လမျးပြောကျနခေဲ့ဖူးတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။
( ၃ ) ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးမရှိဘူး လို့တှေးတာရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ ကို တှေးကွညျ့ပါ။
သူငယျခငျြး ရဲ့ ယာယီအဆငျမပွမှေုတှကွေောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့တနျဖိုးကို သံသယဝငျတာက ဖွဈသငျ့ပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့တနျဖိုးကို အကွှငျးမဲ့မယုံကွညျတာကတော့ လုံးဝမဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးမရှိဘူး လို့ ခံစားလာရရငျ ဘာကွောငျ့အဲ့လိုခံစားနရေလဲဆိုတာကို ရှာဖှပွေီး တနျဖိုးမရှိတာရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ ကိုတှေးကွညျ့ပါ ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ တနျဖိုးရှိတယျ လို့ တှေးမိရငျ သူငယျခငျြး ရဲ့ ယုံကွညျမှုတှေ ခှနျအားတှေ တဈရှိနျထိုး တိုးတကျလာပွီး ဘာပဲလုပျလုပျ ပွီးမွောကျအောငျမွငျလာမှာပါ။
( ၄ ) မိမိရဲ့ အမှနျတရား ကို ရှာဖှပေါ။
ဆိုလိုတာက "ကိုယျ့ကိုယျကို ရိုးသားပါ"လို့ ပွောခငျြတာပါ။ လူသားတှရေဲ့ ဦးနှောကျ က ကှနျပြူတာစကျတဈလုံးလိုပါပဲ တဈခါတဈလမှော ကိုယျတိုငျ သိမျးလို့သိမျးလိုကျမှနျးမသိတဲ့ အမှနျတရားတှေ ကို သူက သိမျးပေးထားတတျပါတယျ။ ဥပမာ - ကိုယျက စာကကျြစရာရှိတယျ ဒါပမေဲ့ ရပွီးသားပါ နောကျမှကကျြတော့မယျ ဆိုပွီး ထားလိုကျတယျ။ အဲ့တာကို ဦးနှောကျ မပွီးသေးသောအလုပျ ဆိုပွီးမှတျထားလိုကျတာပါ။ မပွီးသေးတဲ့အလုပျတှေ ထပျတလဲလဲ ဖွဈလာတဲ့အခါ မငျးရဲ့ လုပျနိုငျစှမျးတှလေညျး ကဆြငျးလာပါတယျ။ လုပျနိုငျစှမျးတှေ ကဆြငျးလာတဲ့အခါ ဘာလုပျလုပျ မအောငျမွငျတော့ပါဘူ။း အဲ့မှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အသုံးမကဘြူး တနျဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ဝငျလာတာပါ။
ဆိုတော့ သူငယျခငျြးအနနေဲ့ အဲ့လို အတှေးတှေ ဝငျမလာဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ရိုးသားဖို့ မှနျကနျဖို့လိုပါတယျ။
( ၅ ) တခွားတဈခုခုကို အာရုံပွောငျးကွညျ့ပါ။
စိတျတအားပငျပနျးလာတဲ့အခါ စိတျသကျသာမဲ့အရာတဈခုခုဆီ အာရုံစိုကျလိုကျပါ။ တခွားကို အာရုံပွောငျးဖို့အတှကျဆို တဈခုကို အာရုံဖွတျရပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ တနျဖိုးမရှိဘူးလို့ တှေးမိတဲ့အခါ အဲ့အတှေး ကို အကွောကျအကနျ မငွငျးပယျပါနဲ့ ။ လကျခံလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ကိုယျစိတျသကျသာမဲ့ အရာတဈခုကို လုပျကွညျ့ပါ ။ အားလုံးတညျငွိမျသှားရငျတော့ ကိုယျ့တနျဖိုးကို နောကျတဈခါတညျဆောကျပါ။
လောကမှာ အမွဲတမျးခညျြး ကောငျးသောအခြိနျတှပေဲ မဟုတျပါဘူး တဈခါတဈရံ အဆငျမပွမှေုတှမြေားလာတဲ့အခါ သူသူငါငါ "Self Esteem" ပြောကျဆုံးတတျပါတယျ။ ပြောကျတာ ပွဿနာမဟုတျပါဘူး ပွနျမရှာတာက ပွဿနာပါ။ ဒီတော့ အားလုံး ကိုယျ့တနျဖိုးတှေ ပြောကျဆုံးနတေဲ့အခါ တှအေ့ောငျပွနျရှာပါ။
အားလုံးမှာ ကိုယျပိုငျတနျဖိုးတှေ ရှိတယျဆိုတာကို လုံးဝ မမပေ့ါနဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါ ဒီအချက် ( ၅ ) ချက်ကို သတိရပါ။
သူငယ်ချင်း ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမဝင်တဲ့လူ လို့ ခံစားနေရလား ???
သူငယ်ချင်းရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ အနှုတ်လက္ခဏာ ဆောင်နေပါသလား ???
ဒီလိုဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် အချက် ( ၅ ) ချက် ကို ပြောပြပေးပါ့မယ်
( ၁ ) ဒီခံစားချက်တွေ က တစ်ခဏတာ ဆိုတာ သတိရပါ
သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘဝမှာ ခံစားချက်တွေက ဘယ်တော့မှ အဆိုးမရပါဘူး။ အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတာပါ။ သူငယ်ချင်းလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါ ဒီခံစားချက်က ယာယီပဲ၊ အဆင်မပြေမှုတွေဟာလည်း ခဏတာပဲ ဆိုတာ သတိရပါ။
( ၂ ) ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် တွေလည်း ဒီလို ခံစားဖူးကြတယ် ဆိုတာ သတိရပါ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဆန္ဒတွေ ရှိကြပါတယ် အဲဒီ့ဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူး လို့ တွေးမိကြတာပါ။ ဒီလို တွေးမိတာဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ( Facebook ) ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ "မက်ဇူကာဘက်"တောင် သူ့ရဲ့ တခြားဆော့ဖ်ဝဲတွေ မအောင်မြင်ခဲ့တုန်းက သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျ လမ်းပျောက်နေခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
( ၃ ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူး လို့တွေးတာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ကို တွေးကြည့်ပါ။
သူငယ်ချင်း ရဲ့ ယာယီအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို သံသယဝင်တာက ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို အကြွင်းမဲ့မယုံကြည်တာကတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူး လို့ ခံစားလာရရင် ဘာကြောင့်အဲ့လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကို ရှာဖွေပြီး တန်ဖိုးမရှိတာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ကိုတွေးကြည့်ပါ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးရှိတယ် လို့ တွေးမိရင် သူငယ်ချင်း ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ခွန်အားတွေ တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်လာပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြီးမြောက်အောင်မြင်လာမှာပါ။
( ၄ ) မိမိရဲ့ အမှန်တရား ကို ရှာဖွေပါ။
ဆိုလိုတာက "ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားပါ"လို့ ပြောချင်တာပါ။ လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက် က ကွန်ပျူတာစက်တစ်လုံးလိုပါပဲ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်တိုင် သိမ်းလို့သိမ်းလိုက်မှန်းမသိတဲ့ အမှန်တရားတွေ ကို သူက သိမ်းပေးထားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ်က စာကျက်စရာရှိတယ် ဒါပေမဲ့ ရပြီးသားပါ နောက်မှကျက်တော့မယ် ဆိုပြီး ထားလိုက်တယ်။ အဲ့တာကို ဦးနှောက် မပြီးသေးသောအလုပ် ဆိုပြီးမှတ်ထားလိုက်တာပါ။ မပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်လာတဲ့အခါ မင်းရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေလည်း ကျဆင်းလာပါတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ကျဆင်းလာတဲ့အခါ ဘာလုပ်လုပ် မအောင်မြင်တော့ပါဘူ။း အဲ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမကျဘူး တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်လာတာပါ။
ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ အဲ့လို အတွေးတွေ ဝင်မလာဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားဖို့ မှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။
( ၅ ) တခြားတစ်ခုခုကို အာရုံပြောင်းကြည့်ပါ။
စိတ်တအားပင်ပန်းလာတဲ့အခါ စိတ်သက်သာမဲ့အရာတစ်ခုခုဆီ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ တခြားကို အာရုံပြောင်းဖို့အတွက်ဆို တစ်ခုကို အာရုံဖြတ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ တွေးမိတဲ့အခါ အဲ့အတွေး ကို အကြောက်အကန် မငြင်းပယ်ပါနဲ့ ။ လက်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်စိတ်သက်သာမဲ့ အရာတစ်ခုကို လုပ်ကြည့်ပါ ။ အားလုံးတည်ငြိမ်သွားရင်တော့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို နောက်တစ်ခါတည်ဆောက်ပါ။
လောကမှာ အမြဲတမ်းချည်း ကောင်းသောအချိန်တွေပဲ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတစ်ရံ အဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါ သူသူငါငါ "Self Esteem" ပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ ပျောက်တာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး ပြန်မရှာတာက ပြဿနာပါ။ ဒီတော့ အားလုံး ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါ တွေ့အောင်ပြန်ရှာပါ။
အားလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
Read times Last modified on Monday, 09 November 2020 15:44